Iminyaka eyi-32 kamva, zixhuma iingcingo, ukujikeleza okufutshane - iGoofumed
I-32 kwiminyaka kamva, qhagamshela iingcingo, ujikelezo olufutshane
Epreli, 2013 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Uhambo lweeholide zasehlotyeni luye lwaba ngaphezu kokukhululeka koxinzelelo. Hhayi nje kum, kuye kwaba yintsapho yam eyayihamba nayo.
Ngamanye amaxesha isifaniso esidityaniswa ziingcingo kubonakala ngathi siyinyani kangangokuba akukho xesha lokubonisa. Ubushushu behlobo kunye nomnqweno wokuya kuhlamba emlanjeni usike i-melancoly ye «kanye apha«, Okwethutyana kodwa emva kweeyure ezintlanu zokuhamba, silele ngesando ndiyifumana stream ngokukhawuleza, kwi-pixel ngqo malunga nechanekileyo nje kuphela Plex.Earth Unokwenza.
Le yindawo apho ndazalelwa khona, kwaye ndachitha iminyaka yokuqala yokubantwana. Isiqingatha sento awayezaziyo nokukholwa yayiyimilingo; kakhulu kangangokuba ngamanye amaxesha ndicinga ukuba akuzange kwenzeke:
Ama-mañanitas akhuphukela kwi-potrerito apho utata wam wabela khona iinkomo; Sithatha i-foam kwibhakethi yobisi usebenzisa i-leaf leaf. Kwimvelaphi i-mistiricuco yayisacula isandi sokukhupha inkukhu eyayingenakuyidla ebusuku kunye nemicimbi yothando eyayilahlekile ngentsasa.
Emva koko ndadla iitrotilla zengqolowa, zenziwe ngokutsha, zitshisa, zahlula kwi-plate ye-milk fresh. Ityuwa encinane yabanika incamatheko enhle ... nangona xa nditshilo, abantwana bam bandibukela ngelinye isohlo.
Amakhwenkwe katata wam eza nesidlo sasemini emva kwemini; Omnye wabo yayinguDon Jerónimo (Chombo), oyena uphithizelayo. Bambulala isikhukhukazi, bayicheqa intamo phaya ngakwingqumba kwaye kwakungekho kusilela "ezinye iipilitla zeDona blanca«. Kanye kuloo paseji babeka itafile ende, ndingekabi nayo itreyini eluhlaza eyayisusa iindonga ezimhlophe ezimhlophe kunye nelimile.
Kwaye emva kwemini abazala baka-Aunt Leda beza kudlala; I-Materinerero ekuzeni nasekuhambeni, emva koko bacula enye eyandingcungcuthekisayo luloyiko «doñana akakho apha, kwintsimi yakhe yezityalo... »oku xa kufike iipremiyamu. Kwaye xa uWil esiza sidlala iindawo ezijikelezayo kwipatio, okanye imbewu ye-cashew emngxunyeni ophantsi kweTamarind ... de sasingasaboni ebumnyameni naxa iGuacos yaqala ukucula apho ecaleni kocango oluhlabayo.
Waya esikolweni kusasa, siye owaphuma ekuseni kakhulu kwaye phantse uhambe iyure ummango waya edolophini ekuthiwa La Laguna zaye ukufika. Isiqingatha semini yeeklasi kunye nebhodi ebhotswe eludongeni kunye ne-eraser pad. Imbuyekezo ngokukhawuleza kuba siyeza longele, nokumemeza yahamba ngeenxa kunye nabahlobo ukuba ubehlala emakhayeni abo apho Don Tono Blanco ukuwela mlanjana apho wil uthi goodbye. Kwaye ke safika ekhaya. Iibhotile ezinambini kunye neembotyi kunye nebhotela kwakusemini; Ezinye kwemini wayeza kuzisa iimazi zazisitya kwisicwangciso Brown, sasiqubha ze ngokupheleleyo okwethutyana echibini La Cachirula waza wakhwela kule nduli kunye nizibophe Sabaneta.
Esi sikolo sasisiphumo sokufa kukayise-ntombi, owafakela kuloo ndawo isikolo samahhala esisebenza ekuseni kwaye apho abantwana abasuka kwiidolophu ezikufutshane benza ibanga labo lesithandathu mahhala. Ngemva kwemini, iklinikhi yakhe isebenze, apho abantu beza khona ukufumana iinkonzo zonyango kuphela kwiikhilomitha eziliwaka.
Unxibelelwano lukatat'omkhulu lwalungummangaliso. Uninzi lwabazala bam bafunda kunye naye, kwaye uxela ibali elingapapashwa "uEl Cuco" ukuba abanye abaguli abanomgama basweleke endleleni okanye sele sele belulile xa befika, kwaye ababuyanga nje ngenxa yokufuna ukwazi ukudibana nogqirha yinyani Endleleni ebuyayo, bothuka bakufumanisa ukuba abakhange bahlawulise kunye nokukhalimela ukungathumeli abantwana babo esikolweni kulo nyaka.
Kwaye kwafika imfazwe yombutho kwaye ngokukhawuleza intambo yaphuka kwinto endicinga ukuba ndiyayiqonda eyiminyaka emibhozo emfutshane. Yonke into yaqala xa iqela lokuqala labanqamlezo lidlulayo, kunye neepaki eziluhlaza ezikwiminyango yazo kunye neefompo zomnquma eluhlaza; ezimbini zazo kunye neendevu ezazingcatsha njengeCubans, amaNicaragua okanye abalandeli belo hlobo; nangona kwimbono yam kwakuyiqela lalaba bantu. Bathabatha ibhokhwe lika-22 kababa, i-stag dagger yesithambo kwaye yashiya loo mvakalelo yokuba kuluhlu esasinalo ncinane.
Ukusuka apho, izibhamu kunye neebhomu zavakala kuyo yonke indawo, kuzo zonke iiyure zomhla kodwa zibuhlungu emini xa iindiza zaqhubhisa iidolophu zase-El Tule, Las Raices kunye ne-El Burillo. Ngokukhawuleza, imihla ngemihla, ukusuka kwiidolophana zaseMfuleni iAraute, ababaleki beza endlwini, amadoda abo kunye nabantwana babeye baqulunqwa ngumbutho we-Farabundo Martí. Oomama babonakala bexakekile, iinwele zabo zikhwankqiswe, ezinye zikhankanya iisanti, zibukela kwiifestile ngexesha elithile abalindi beza kubabulala.
Sasiphila uxinzelelo ekulwa nemidlalo yethu kunye nemfuyo yabantwana ababefika imihla ngemihla, abava ukungaqhelekanga, bathetha abancinci baze bakhala malunga nento yonke. Emva koko bashiya, bashiya inja kunye nezikhwama kwi-barn ngesithembiso sokubuya.
Ekugqibeleni kwakukho inja ezininzi kangangokuba umama wakwazi ukubanika ubuthi ngenxa yesibambiso sokuphepha isifo sobushushu. Kodwa inyaniso kukuba akukho nto kunye nathi, kunye nomlomo ongaphandle wolunye ukondla, kunye neerhafu ezininzi zokulwa; Umama wagqiba ukwenza i-quintal of tortillas imihla ngemihla ukutya inkampu eyayingaphaya kwendlu, phambi komthi we-Nance.
Kukunomdla ukuhamba ngale ndlela efanayo, kunye ne-40 iminyaka kwizinwele zam. Emva kokuba ndiyifunde incwadi yesixhenxe iArashe kwaye ndibone ukuba ndiza kuba yinxalenye yokubulawa kuka-El Rosario ngexesha sabalekela eHonduras, ezininzi izinto zinengqiqo. Ibali lidibanisa, ngenye indlela. Abantu baqonda izinto ngokungenangqondo njengoko imfazwe yayingenakwenzeka kodwa oko kwakungenakugwema. Ekugqibeleni phakathi kwemizila bachonga ukuba kwakuyijaji phakathi kwabampofu, ngelixa iinkokeli ngoku ngaphandle kwelizwe zigidigidi kunye nabanikazi bamagunya ebhanki; ngelixa entabeni, akunakwenzeka ukubuyela kuba iindlela zalahleka.
Ngokombono wam wokuphulaphula oko abo bahlala khona bacinga, ndathetha nabantu abaninzi abangekho besaba ukuthetha okunyanisekileyo. Ndakwazi ukuhamba kumyuziyam we-revolution, apho ndive ilizwi lekhokeli elaliyindoda yokulwa nesibindi kusukela kwiminyaka ye-12 ... imbali inesinye intsingiselo, yinto yokuqala yokubandezeleka.
Akusayikufanelekela ukucinga kwindlela yokuzicingela ukuba kutheni bawathabatha egcekeni apho ndidlala khona iimbombo, nokuba kutheni bathathe iinkomo zikabawo ngaphandle kokucela imvume.
Xa uva uguqulelo lomntu ongenanto, ngaphandle kwephupha lokulwa. Ndiqinisekile ukuba umzabalazo onokuxhoba awuzange ushiye ezininzi, ngaphandle kwekratshi lokulwa nokulungelelanisa. Uyabona ukuba abantu banamandla kwizinto zonke esizenzayo. Kwabanye amaqhawe, abanye baqalekisiwe ... njengoThixo njengabantu thina.
Imiva ewela ... Ndizisola ngabazala baka-7, ndibazalwana bama-4, kunye nezinye izihlobo ze-6 ezikude.
Uyazisola baphulukene 3 abazalwana babo kuphela, uyise, yaye ngaphezu 11 nezizalwane. Liva kabuhlungu xa udade wabo eye wakhubazeka ukusuka imbumbulu e ukakayi lwakhe, umalume wakhe bemelwa ngokuqinisa kwi sam, abane kubo nako nokuba bangcwabe ngokuba ingcwaba lakhe aliveli ukuba abantwana ababini kamalume wakhe ziye skewered ku emoyeni ikrele onencula kunye iipremiyamu ezinkulu nje iminyaka yayo 10 12 kunye bayawugonyamela phambi ebabulele. Emva koko bala enye ukuya kwenye njengabahlobo bakhe, amanye amajoni ... bafa phezu kwamaxandeka Volcancillo e Cerro
Perquin, ekwindla ka Ojos de Agua, ngomhla kwithambeka Azacualpa, e Chorreritas enkonzweni ka El Rosario, kwi Cerro Pando, apho kudibana Meanguera e La Guacamaya, emva e San Vicente, ku Usulután ...
Oku kukuvuyisa ngayo ubomi bethu. Njengoko iminyaka idlulayo, imemori yethu iyayichaphazela kwaye ithumele ukuthanda izinto ezingekho phantsi. Emva koko uzisa emacaleni amaxesha amnandi kwaye awathintele kwi-basting ephuma ukusikhumbuza ukuba kwakunjalo. Sele sele iphakanyisiwe kwimigangatho iyabuyela rhoqo xa silala entanyeni, sizisa iingcinga ezibonakala ngathi ziyinxalenye yebali, kwaye zidibanise nenxoliso ekhuphayo manje esondelene nathi.
Ngokwahlukileyo kwiminyaka eyi-32 kamva, akukho ntlukwano.
Ndingumntu onelungelo alalimthiyile. Ixesha langenza ndakhula iingcambu zengcipheko de ndatshintsha ubunjineli kwi-career.
Yena, umvukeli ozimisele ukufa ngenxa yakhe. Ngoku uyazi ukuba uyasinda into engaphezu kommangaliso.
Le yindlela enempilo ngayo ukudibanisa imicu ngexesha elidlulileyo, ukulibale iigraji kunye neendlela ezikufutshane. Ukwenza iakhawunti, kukho izifundo ezininzi kule ndawo ...
Ngendlela, indawo ibizwa ngokuba yiZatoca. Njengoko ZatocaConnect
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Wattio: Ukusetyenziswa kwamandla kagesi ekhaya
Post Next Bentley ProjectWise, into yokuqala ufuna ukwaziOkulandelayo "